Abụ Ọma 115 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Naanị Chineke ka e kwesịrị ito
Arụsị adịghị ndụ (4-8)
E nyere ndị mmadụ ụwa (16)
“Ndị nwụrụ anwụ anaghị eto Jaa” (17)
115 Jehova, ọ bụghị anyị ka e kwesịrị ito, ọ bụghị anyị,*Kama ọ bụ aha gị ka e kwesịrị ịna-eto+N’ihi ịhụnanya gị* nakwa n’ihi na ị bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi.+ 2 Gịnị mere ị ga-eji kwe ka mba dị iche iche sị: “Olee ebe Chineke ha nọ?”+ 3 Chineke anyị nọ n’eluigwe. Ọ na-eme ihe ọ bụla dị ya mma. 4 E ji ọlaọcha na ọlaedo kpụọ arụsị ha na-efe. Ọ bụ mmadụ kpụrụ ha.+ 5 Ha nwere ọnụ, ma ha anaghị ekwu okwu.+ Ha nwere anya, ma ha anaghị ahụ ụzọ. 6 Ha nwere ntị, ma ha anaghị anụ ihe. Ha nwere imi, ma ha anaghị anụ ísì. 7 Ha nwere aka, ma ha anaghị emetụ ihe aka. Ha nwere ụkwụ, ma ha anaghị aga ije.+ Ha anaghị eji akpịrị ha eme mkpọtụ ọ bụla.+ 8 Ndị na-akpụ ha ga-adị nnọọ ka ha,+Ndị niile tụkwasịrị ha obi ga-adịkwa ka ha.+ 9 Unu ndị Izrel, tụkwasịnụ Jehova obi.+ Ọ bụ ya na-enyere unu aka, bụrụkwa ọta unu.+ 10 Ezinụlọ Erọn,+ tụkwasịnụ Jehova obi. Ọ bụ ya na-enyere unu aka, bụrụkwa ọta unu. 11 Unu ndị na-atụ egwu Jehova, tụkwasịnụ Jehova obi.+ Ọ bụ ya na-enyere unu aka, bụrụkwa ọta unu.+ 12 Jehova na-echeta anyị, ọ ga-agọzikwa anyị. Ọ ga-agọzi ezinụlọ Izrel.+ Ọ ga-agọzi ezinụlọ Erọn. 13 Ọ ga-agọzi ndị na-atụ egwu Jehova,Ma ndị ukwu ma ndị nta. 14 Jehova ga-eme ka unu dị ọtụtụ,Ma unu ma ụmụ unu.+ 15 Ka Jehova, Onye kere eluigwe na ụwa,Gọzie unu.+ 16 Ọ bụ Jehova nwe eluigwe,+Ma, o nyere ndị mmadụ ụwa.+ 17 Ndị nwụrụ anwụ anaghị eto Jaa.+ Onye ọ bụla nke na-agbada n’ili* anaghịkwa eto ya.+ 18 Ma anyị ga na-eto JaaMalite ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Toonụ Jaa!*
^ Ma ọ bụ “E nweghị ihe ruuru anyị, Jehova, e nweghị ihe ruuru anyị.”
^ Na Hibru, “n’ebe a na-anọ duu.”